Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): 17 May 2014 (၂း၄၀)အချိန်လားရှိုးဖက်ကတက်လာသောဗမာအစိုးရတိုက်လေယာဉ်(G4Galeb)နှစ်စင်းဖြင့်ပစ်ခပ်တိုက်ခိုက်
17 May 2014 (၂း၄၀)အချိန်လားရှိုးဖက်ကတက်လာသောဗမာအစိုးရတိုက်လေယာဉ်(G4Galeb)နှစ်စင်းဖြင့်ပစ်ခပ်တိုက်ခိုက်
at 5/20/2014 10:50:00 AM
Naw Jadup's photo.
Dung 8,Ba4ginraashawng lam post3hpe Lashio maga de na lung wa ai myen asuyaahpyen nbungli(G-4 GALEB)2the dai ni may 17 ya 2:40 pm daram hta sa htim gasat nga ai lam shiga lu na ai.akyu hpyi ya na matu mung lajin dat ma ai.
KIA တပ်မဟာ (၄)တပ်ရင်း(၈)ရဲ့ရှေ့တန်းစခန်း(၃)နေရာကိုဒီနေ့ မေလ(၁၇)ရက်နေ့ညနေပိုင်း(၂း၄၀)အချိန်လားရှိုးဖက်ကတက်လာသောဗမာအစိုးရတိုက်လေယာဉ်(G4Galeb)နှစ်စင်းဖြင့်ပစ်ခပ်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
့မြန်မာစစ်အစိုးရ ပြည် တွင်းစစ်၌ လေယဉ်သုံး
ရှမ်းမြောက် ရှိ ကေအိုင်အေ နှင့် TNLAတို့ 
အားအ မြစ် ပြုတ် ရေးနေပြည်တော်စစ်ချုပ်
ရုံးမှ သတင်း မှန် ကန်ပြီ။
Labels: News, သတင်းဓာတ်ပုံ